'I-Wahlburgers:' Ibali leNdlela yeMbali yeBhanyabhanya yoSapho eyabethwa yinyani kwiTV yeGolide - Itv
Eyona Itv 'I-Wahlburgers:' Ibali leNdlela yeMbali yeBhanyabhanya yoSapho eyabethwa yinyani kwiTV yeGolide
'I-Wahlburgers:' Ibali leNdlela yeMbali yeBhanyabhanya yoSapho eyabethwa yinyani kwiTV yeGolide
UPaul noMark Wahlberg.
Xa uRasha Drachkovitch, umnini weBlue Productions ezingama-44, efikelela kuMark Wahlberg malunga nokusebenza kunye kumdlalo malunga nosapho lukaWahlberg, wayengazi ukuba luhlobo luni lwe-adventure oluza kubakho.
Yonke le nto iqale ngenqaku endilifundileyo malunga noMark noDonnie bevula ivenkile yokutyela eBoston, ucacisa uDrachkovitch. Ke siye safikelela kubo sicinga, 'Ngawaphi amathuba?' Kodwa, ndikwazile ukukhusela intlanganiso noMark kwaye impendulo yakhe yokuqala kwimbono yayikukuba, 'Ucinga ukuba ngenene abantu banomdla kule nto?' 'Ngokuqinisekileyo! Unqobile umculo kunye nefilimu kunye nomabonwakude kwaye ngoku uthatha ishishini lokutyela. Uphendule wathi, 'Ewe, kuya kufuneka uze apha udibane nosapho kunye nawo onke amanye amaqokobhe agcwele ubomi bethu.' Emva koko undixelele ukuba ufuna ukuba ndihambe ngengomso kwaye ndinyaniseke. , Bendingazi ncam ukuba uphi uHingham, eMassachusetts, kodwa into elandelayo ndandisazi ukuba ndiza ngenqwelomoya kwindawo yaseBoston ukuyokuhlangana nayo yonke indlu yaseWahlberg.
UDrachkovitch ukholelwa ukuba olo hambo lwaluluvavanyo kancinci. Ndingene ngaphakathi kwaye zonke iiWahlbergs bezindibambile zinditsala. Bonke banobuhlobo kwaye banomdla kwaye, ngokungathandabuzekiyo, zininzi zazo ke zazineengxabano kum.
Uninzi lwabantu luyazi ngabazalwana ababini baseWahlberg, uMark noDonnie, kodwa into abantu abaninzi abangayaziyo kukuba kukho abantwana abasithoba baseWahlberg bebonke.
Ngaphantsi kweliso elibukhali likamama u-Alma, abantakwabo Wahlberg bakhule kwenye yezona ndawo zinzima eBoston, eMassachusetts. Usapho lwaluhlala kwindlu encinci kwaye lusokola ukufumana imali, ihlala ixhasa ukutya okuziinkozo okanye iisendwitshi ezenziwe nge-bologna kunye 'netshizi zikarhulumente,' njengoko uAlma onothando enjalo ebhekisa kukutya okuthengwe ngoncedo lukarhulumente.
Ndicinga ukuba abantu bayothuka malunga nokuba zazinzima kangakanani iziqalo zabo, utshilo uDrachkovitch. Kwaye ababaninzi abantu abazi ukuba uMarko wayenengxaki nomthetho xa wayesemncinci. Izinto zazirhabaxa ngokwenyani kolu sapho ngoko kuyamangalisa apho bakhoyo ngoku.
Apho bakhoyo ngoku uMarko ayisiyiyo inkwenkwezi yefilimu kuphela, kodwa ungumvelisi ophumeleleyo, emva kokuba eqale njengenkokeli yeqela lomculo UMarky uMarko kunye neFunky Bunch . UDonnie, ngoku udlala indima kumdlalo weqonga Igazi eBlue ikwanomsebenzi wefilimu kwaye yayiyinxalenye yeqela elithengisa iplatinam Abantwana abatsha kwiBhloko.
Usapho lukwanazo neendawo zokutyela ezimbini, umphefumlo alithoba , Ukusekwa okuphezulu kunye Wahlburgers , ngokudibeneyo kweburger. Zombini ziqhutywa nguPaul Wahlberg, umpheki oqeqeshiweyo.
UDrachkovitch wayefuna ukuqaqambisa ishishini lokutyela losapho ngokukodwa, ekholelwa ekubeni ababukeli bazokutsalwa njengoko bebukele iWahlbergs isebenza ukwandisa ukufikelela kwabo kumzi mveliso wokutya.
Kuyabonakala ukuba, uDrachkovitch waphumelela usapho lwaseWahlberg 'kuvavanyo' kwaye izinto zasuka apho. Nje ukuba ndigqithe kuloo nto, inqanaba lokuthembana phakathi kwam nosapho lazalwa kwaye kwaba kuhle ukusukela ngoko. Kodwa, ngokuqinisekileyo yayingeyonto yobusuku, yathatha iminyaka emibini ukusuka kumbono ukuya kusasazo lwesiqendu sokuqala, kodwa kulungile kuba utyalomali luhlawula ngoku, utshilo uDrachkovitch.
Ukusebenza njengabavelisi abaLawulayo kumdlalo, uMark noDonnie babandakanyeka kakhulu kuyo yonke imiba yemveliso. Bafuna ukuqiniseka ukuba into yosapho iyavela. Lo mboniso unentliziyo eninzi, uvakalelo oluninzi. Leyo yinxalenye yethemba lethu kubo; Ukuqinisekisa ukuba abayamkeli kuphela indlela yethu yeprojekthi, kodwa ukwenziwa kwayo kunye nokuchaza kukaDrachkovitch.
Umboniso awubonisi kuphela uMarko kunye noDonnie, kodwa uPaul noAlma bafumana ixesha elininzi lesikrini. Ngapha koko, ezi Wahlbergs zimbini zokugqibela zibonakala ngathi ziinkwenkwezi zoluhlu njengoko uPaul, owayephethe imisebenzi kwinqanaba lomhlaba, esokola ukugcina iivenkile zokutyela ziqhuba phakathi kukaMark noDonnie wokufuna ukwandisa, ngelixa uAlma esebenza ngokuzimisela ukugcina uxolo phakathi kwabantakwenu abakhuphisana kakhulu.
Kukwabonakala kulo mboniso nguJohnny Drama kunye noNacho Extreme, abahlobo bakaMark abasuka ebumelwaneni abathi, ngelixa bengabantu bokwenyani, badlalwa kumdlalo weqonga Ukukhuthaza, uthotho oluveliswe nguMarko. Ezi zi 'knuckleheads' athe uMarko ngothando wanyanzelisa uDrachkovitch ukuba ahlangane kwangoko kwinkqubo yemveliso.
Ngenxa yobukhulu bosapho kunye neendawo abasebenza kuzo, ukuvelisa umboniso ngumceli mngeni othile, utshilo uDrachkovitch. Indawo kaDonnie eseNew York, ikomkhulu likaMark eLos Angeles kunye nendawo yokutyela yokuqala yaseWahlburger iseBoston. Bandisa iindawo zokutyela kwihlabathi liphela ngoko ke kunzima ukulawula iishedyuli kunye nokuhamba kunye nayo yonke loo nto.
UDrachkovitch uyavuma ukuba ngelixa ukuququzelela imveliso kunokuba kukurhafisa, umphumo wokugqibela ufanelekile. Nje ukuba udibanise lonke usapho kumnandi kuba zihams. Ngokuzimisela, konke okufuneka ukwenze kukukhomba ikhamera kuAlma; uyathandeka kwaye uyahlekisa. Ke unosukuzwano phakathi kwamakhwenkwe okuthi, ngelixa ukhuphiswano, ungaze uthethe. Konke kumnandi ukubukela. Kwaye ke kukho uPawulos; Ukutsalwa kukaPaul kwisalathiso sesigidi kuba wonke umntu ufuna ukuba enze izinto kwaye konke afuna ukukwenza kukwenza nje iburger. Yinto ehlekisayo ngokwenene igolide olu sapho.
UDrachkovitch uyathemba ukuba ababukeli abazukuyibhala le nkqubo njengenye yenkqubo yokwenyani, bacela abantu ukuba bazame lo mboniso ngaphambi kokugweba. Ndikhuthaza abantu ukuba bavule kuba ndicinga ukuba bayakumangaliswa yinto abayibonayo malunga nendlela evuleke ngayo le ntsapho. Banokuba ngabalandeli bakaDonnie, banokuba ngabalandeli bakaMarko okanye abanokwazi kwanto, kodwa ndicinga ukuba yintoni eyothusa wonke umntu yindlela olu sapho oluvela ngayo naphi na ukuba luphumelele kumanqanaba amaninzi kwaye aqhelekile kunye nomhlaba. Abantu badla ngokucinga ukuba abantu abadumileyo abanakuchukunyiswa, umgama kwaye bazimelele, kodwa ndicinga ukuba uyakubona ukuba iWahlbergs ijongana nemicimbi efanayo yosapho esijongana nayo kwaye esiphelweni sosuku, kwaye bayathandana kwaye bayaxhasana . Ndicinga ukuba abantu bayakuchaphazeleka ngumboniso.
Ababukeli abaninzi babonakala ngathi sele bezile Wahlburgers abalandeli njengoko kungqinwa yile yokuba umboniso ngoku ukwisizini yesithathu kwaye awubonakalisi phawu lokucotha.
Ngokucacileyo uDrachkovitch akadlali xa esithi utyalo-mali lwakhe olude kulo mboniso luyahlawula, kodwa eyona nto ayonwabileyo kukuba olu luhlu, ukujonga okuhlekisayo kusapho lonke lwaseMelika olusebenza nzima ukufikelela kwiinjongo zabo, mhlawumbi lukhokelela indlela yemiboniso emininzi yohlobo lwayo. Ndingathanda ukubona oku kuyindlela eya kwintliziyo kunye noburharha kwinyani kamabonakude. Ndicinga ukuba abantu bayatsaleleka kuloo nto ngenxa yokuba isekelwe enyanisweni kwaye iyakhuthaza kwaye nokuba ungubani okanye wenzani, ukubukela into ephefumlelweyo inokwakha kwaye izalisekise.
Wahlburgers ibuyela kwisizini yayo yesithathu ngoLwesithathu, Januwari 7 ngo-10e / p kwi-A & E. Ngolwazi oluthe kratya, nceda undwendwele iwebhusayithi ye-A & E Apha.
Yeyiphi i-NYC yokutya Co-Op ekulungeleyo?
UPatti LuPone kunye noChristine Ebersole Thrill, Charge kunye neFascinate kwi 'War Paint'
INkomfa yooSodolophu ifuna ukuphela kokungalingani kwerhafu yokuthengisa ngaphandle kurhulumente
Uluhlu lweminikelo yamazwe angaphandle yaseClinton
leliphi ijelo elivelayo
I-megyn kelly kunye ne-bill o'reilly
Kutheni hulu ineentengiso ezininzi kangaka
ifaskoti eblowu 3 izidlo mahala
Ziza kuphuma nini iimfazwe zeenkwenkwezi ezilandelayo